ရွှေဝါရောင်ကို အမေ့ပျောက်ခံမဖြစ်ဖို့နဲ့ လက်သည်တွေ...
18 ก.ย. 2562 - 16:01 น.
လွှတ်တော်တွင်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဖို့ ကြိုးပမ်းချက်တွေ အဖြေမထွက်ခဲ့ရင် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးပါဝင်တဲ့ပုံစံနဲ့ အခြေခံဥပဒေသစ်တစ်ရပ် ပေါ်ထွန်းဖို့ တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးအခမ်းအနားက ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ၁၂ နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားတွေကို ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေးမြို့မှာ စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်က တစ်ပြိုင်တည်းကျင်းပခဲ့ပြီးနောက် ခုလို ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုထုတ်ပြန်လိုက်ချိန်ဟာ လွှတ်တော်တွင်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးမူကြမ်း ၃ ခုထိ တင်သွင်းပြီးချိန်နဲ့လည်း တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေး ပြည်ခိုင်ဖြိုးအမတ်နှစ်ဦးက တင်သွင်းတဲ့ဥပဒေကြမ်းနှစ်ခုနဲ့ တပ်မတော်သားအစုအဖွဲ့က တင်သွင်းတဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခု စုစုပေါင်း သုံးခုအထိ ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။
လွှတ်တော်တွင်း အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေ အဖြေမထွက်ခဲ့ရင် ပြည်သူ့တိုက်ပွဲနဲ့ ဒီဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းဖို့၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနဲ့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့ ဥပဒေသစ်တစ်ရပ် ပေါ်ထွန်းဖို့ တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ ဒီထုတ်ပြန်ချက်က ဆိုပါတယ်။
လက်ရှိမှာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ချင်တဲ့သူတွေနဲ့ မပြင်ချင်တဲ့အင်အားစုတွေကြား လွန်ဆွဲနေပြီး ဒါကို အဟန့်အတားဖြစ်စေတဲ့ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေကို သတိရှိရှိနဲ့ ကာကွယ်ကြဖို့လည်း လိုအပ်တယ်လို့ သံဃာတော်တွေက သတိပေးပါတယ်။
ဒါ့အပြင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ပြည်တွင်းစစ်အပြီးရပ်စဲရေးနဲ့ ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်ဖို့ လက်နက်ကိုင်တွေအားလုံး စစ်မှန်တဲ့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုနဲ့အဖြေရှာဖို့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။
ပြည်သူတင်မြှောက်တဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာ လိုသလောက် အပြောင်းအလဲတွေ မရသေးပေမယ့် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဖြစ်လာမယ်လို့ ရွှေဝါရောင်ဦးဆောင်လှုပ်ရှားသူ ဆရာတော်ဦးစိန္တိတက ဘီဘီစီကို မိန့်ပါတယ်။
ပခုက္ကူရွှေဝါရောင်အရေးမှာ ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်တဲ့ ဆရာတော်ဦးစိန္တိတက လက်ရှိမှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေးကို လိုလားတယ်လို့ မိန့်ပါတယ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရက ဒါတွေကို ဖော်ဆောင်နေတာ ကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုတယ်လို့ ဆရာတော်က ဆက်မိန့်ပါတယ်။
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးဟာ သိပ်မဝေးတဲ့ကာလမှာဖြစ်ခဲ့တာတောင် ခုချိန်ထိ လက်သည်တရားခံတွေက တစ်စုံတစ်ရာ ထုတ်ဖော်ဝန်ခံမှုမရှိသေးဘူးလို့ အဲဒီကာလတုန်းက ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ မဖြိုးဖြိုးအောင်က ပြောပါတယ်။
'ရွှေဝါရောင်က ၁၉၆၂ ၊ ၁၉၈၈၊ ၁၉၉၆ နဲ့ ၁၉၉၈ တို့လို ထပ်ပြီး အမေ့ဖျောက်ခံလို ဖြစ်လာနေတာ တွေ့ရတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ ဒါက သိပ်မဝေးတဲ့ကာလကဖြစ်တယ်။ တကယ့်ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို ကျွန်မတို့လက်မခံတဲ့တိုင်အောင် ဒီရွှေဝါရောင်ကြောင့်ပဲ ၂၀၁၀ နောက်ပိုင်း အရပ်သားအစိုးရအခင်းအကျင်း ပေါ်လာခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ဒီဖြစ်စဉ်မှာ တစ်စုံတစ်ရာ တာဝန်ယူဖို့၊ တာဝန်ခံဖို့လိုအပ်တယ်' လို့ သူက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
လက်ရှိမှာ တပ်မတော်က ပုဒ်မနှစ်ခုကို အဓိကပြင်ဆင်တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးမူကြမ်းကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကို တင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီဥပဒေကြမ်းမှာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် တာဝန်ယူမယ့်သူတွေ ကိုယ်တိုင်နဲ့ သူတို့ရဲ့ ဆွေမျိုးတွေဟာ နိုင်ငံခြားသားမဖြစ်ရ ဆိုတဲ့အချက်ကို အဓိက ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ ဒါဟာ သမ္မတ ဖြစ်ခွင့်အရည်အချင်းထဲက ပုဒ်မ ၅၉ (စ) ရဲ့ နယ်ပယ်ကိုချဲ့ထွင်တာလို့ အန်အယ်လ်ဒီ လွှတ်တော်အမတ် ဒေါက်တာမြတ်ဉာဏစိုး ကပြောကြားထားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း တပ်ကတင်တဲ့ဥပဒေကြမ်းက ဥပဒေနဲ့ညီတဲ့အတွက် လွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီက စိစစ်မယ်လို့ ကော်မတီအတွင်းရေးမှူးလည်းဖြစ်တဲ့သူက ဆိုပါတယ်။
လွှတ်တော်တွင်းမှာ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေး အာဏာရပါတီနဲ့ အတိုက်အခံအုပ်စုတွေကြား ပွတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်နေချိန်မှာ လွှတ်တော်ပြင်ပ လမ်းကြောင်းကနေလည်း ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဖို့ ခုလိုတွန်းအားပေးတာတွေရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ရွှေဝါရောင်ကို အမေ့ပျောက်ခံမဖြစ်ဖို့နဲ့ လက်သည်တွေ ဖော်ထုတ်ဖို့ လိုအပ်